အမရေိကနျ သိပ်ပံပညာရှငျဘ၀မှ ရဟနျးဖွဈလာစတေဲ့ အကွောငျးအရငျး – Youth Bar
အမရေိကနျ သိပ်ပံပညာရှငျဘ၀မှ ရဟနျးဖွဈလာစတေဲ့ အကွောငျးအရငျး
ကမ်ဘာပျေါတှငျ ရှိရှိသမြှနှငျ့ ရှိခဲသမြှ ပုဂ်ဂိုလျအပေါငျးတို့တှငျ ပညာအကွီးမားဆုံးပုဂ်ဂိုလျမှာ ဗုဒ်ဓဘုရားဖွဈနကွေောငျး သိရှိလာရပွီးဗုဒ်ဓ၏ စာပမြေားက ညှနျပွထားသော အဆုံးအမမြား ကသာလြှငျ မိမိဘဝတိုးတကျရေးအတှကျ ပစ်စုပ်ပနျ သံသရာနှဈဖွာ ကောငျးကြိုးအတှကျ အမှနျဆုံး၊ အကောငျးဆုံး၊ အမွတျဆုံးဖွဈကွောငျး၊
ထို့ကွောငျ့ သညျတိုငျး၊ သညျဒသေ၊ ပုဂ်ဂိုလျမြားကလကျခံထားသရှေ့ ဤတဈပါးကြောငျးကလေးတှငျ တဈသကျပတျလုံးနပွေီတရားအားထုတျသှားရနျ ရညျရှယျဆုံးဖွတျထားကွောငျး” ရှငျးပွသှားသညျ။ထိုကွောငျ့ ကကွီး ၊ ခကှေးကအစ မူလတနျးမှနေ တက်ကသိုလျအဆငျ့ဆငျ့အထိ သငျကွားခဲ့ကွသညျ့ စာပပေညာမြား၊.
အတတျပညာ၊ နညျးပညာမြားသညျ ပစ်စုပ်ပနျတဈဘဝစားဝတျနရေေး ခမျြးသာရေးအတှကျ အကြိုးပွုသညျ။ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ၏ အဆုံးအမ တရားတျောမြား၊ ဗုဒ်ဓစာပမြေားမှာကား မိမိ၏ ပစ်စုပ်ပနျဘဝနှငျ့ သံသရာအဆကျဆကျတို့တှငျအမွငျ့ဆုံး အမွတျဆုံး
အခမျြးသာဆုံးနှငျ့ နိဗ်ဗာနျခမျြးသာအထိ ရရှိအောငျ၊ ရောကျအောငျ ပို့ဆောငျပေးနိုငျကွောငျးမှာ ရှငျးလငျးလှပသေညျ။ အခုလိုအခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသောနလေ့ေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျ ပါတယျနျော။
အဂ်ဂမဟာကမ်မဋ်ဌာနစရိယ၊ဓမ်မစရိယ ဖားအောကျတောရဆရာတျောကွီး ဘဒ်ဒ န်တအာစိဏ်ဏ၏ ဖားအောကျတောရရိပျသာကြောငျးတှငျအနောကျတိုငျးသား နိုငျငံခွားသား ယောဂီအမြားအပွား ရဟနျးဝတျ၍ တရားအားထုတျနသေညျကို တှရေ့သညျ။ ၄ငျးတို့အထဲတှငျသနျးကွှယျသူဌေးမိသားစုမှ ဆငျးသကျလာသော လခစား အမရေိကနျ သိပ်ပံပညာရှငျတဈရှငျတဈဦးလညျး ရဟနျးဝတျပွီး တရားအားထုတျနသေညျ။
အဆိုပါ ရဟနျးကို မီဒီယာ ဂြာနယျလဈတဈဦးက မေးခှနျးထုတျသညျ။” အရှငျဘုရားသညျ သနျးကွှယျသူဌေး သိပ်ပံပညာရှငျကွီးဖွဈပါလကျြ အဘယျသို့သောအကွောငျးကွောငျ့ရဟနျးဝတျပွီး သမထဝိပဿနာတရား စခနျးမှာ တရားအားထုတျနပေါသနညျး။ အဘယျအထိ ဤသို့တရားအားထုတျရနျ ရညျမှနျးထားပါသနညျး” ဟုမေးသညျ။
ထိုအခါ ရဟနျးကဖွသေညျမှာ ” ဖားအောကျတောရ ဆရာတျောဘုရားကွီး အမရေိက သာသနာပွုခရီးတှငျ ဟောကွားညှနျပွတျောမူသော ဗုဒ်ဓတရားတျောမြားကို နာကွားရသောအခါ ကမ်ဘာပျေါတှငျ အကွီးကယျြဆုံး သိပ်ပံပညာရှငျမှာ ဗုဒ်ဓဖွဈနကွေောငျး ၊ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ရှိရှိသမြှနှငျ့ ရှိခဲသမြှ ပုဂ်ဂိုလျအပေါငျးတို့တှငျ ပညာအကွီးမားဆုံးပုဂ်ဂိုလျမှာ ဗုဒ်ဓဘုရားဖွဈနကွေောငျး သိရှိလာရပွီး ဗုဒ်ဓ၏ စာပမြေားက ညှနျပွထားသော အဆုံးအမမြား ကသာလြှငျ မိမိဘဝတိုးတကျရေးအတှကျ ပစ်စုပ်ပနျသံသရာနှဈဖွာ ကောငျးကြိုးအတှကျ အမှနျဆုံး၊ အကောငျးဆုံး ၊ အမွတျဆုံးဖွဈကွောငျး ၊ ထို့ကွောငျ့ သညျတိုငျး ၊ သညျဒသေ ပုဂ်ဂိုလျမြားကလကျခံထားသရှေ့ ဤတဈပါးကြောငျးကလေးတှငျ တဈသကျပတျလုံးနပွေီး တရားအားထုတျသှားရနျ ရညျရှယျဆုံးဖွတျထားကွောငျး” ရှငျးပွသှားသညျ။
ထိုကွောငျ့ ကကွီး ၊ ခကှေးကအစ မူလတနျးမှနေ တက်ကသိုလျအဆငျ့ဆငျ့အထိ သငျကွားခဲ့ကွသညျ့ စာပပေညာမြား၊ အတတျပညာ နညျးပညာမြားသညျ ပစ်စုပ်ပနျတဈဘဝစားဝတျနရေေး ခမျြးသာရေးအတှကျ အကြိုးပွုသညျ။
ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ၏ အဆုံးအမ တရားတျောမြား၊ဗုဒ်ဓစာပမြေားမှာကား မိမိ၏ ပစ်စုပ်ပနျဘဝနှငျ့ သံသရာအဆကျဆကျတို့တှငျ အမွငျ့ဆုံး အမွတျဆုံး အခမျြးသာဆုံးနှငျ့ နိဗ်ဗာနျခမျြးသာအထိ ရရှိအောငျ ၊ရောကျအောငျ ပို့ဆောငျပေးနိုငျကွောငျးမှာ ရှငျးလငျးလှပသေညျ။
(ကြီးသဲညှနျ့နိုငျ) copy-Bhikkhu’s Dhamma
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိရှိသမျှနှင့် ရှိခဲသမျှ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တွင် ပညာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်နေကြောင်း သိရှိလာရပြီးဗုဒ္ဓ၏ စာပေများက ညွှန်ပြထားသော အဆုံးအမများ ကသာလျှင် မိမိဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် ပစ္စုပ္ပန် သံသရာနှစ်ဖြာ ကောင်းကျိုးအတွက် အမှန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး၊ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊
ထို့ကြောင့် သည်တိုင်း၊ သည်ဒေသ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များကလက်ခံထားသရွေ့ ဤတစ်ပါးကျောင်းကလေးတွင် တစ်သက်ပတ်လုံးနေပြီတရားအားထုတ်သွားရန် ရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း” ရှင်းပြသွားသည်။ထိုကြောင့် ကကြီး ၊ ခကွေးကအစ မူလတန်းမှနေ တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆင့်အထိ သင်ကြားခဲ့ကြသည့် စာပေပညာများ၊.
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြောင့် ရဟန်းဖြစ်လာရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်
အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာများသည် ပစ္စုပ္ပန်တစ်ဘဝစားဝတ်နေရေး ချမ်းသာရေးအတွက် အကျိုးပြုသည်။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ တရားတော်များ၊ ဗုဒ္ဓစာပေများမှာကား မိမိ၏ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝနှင့် သံသရာအဆက်ဆက်တို့တွင်အမြင့်ဆုံး အမြတ်ဆုံး
အချမ်းသာဆုံးနှင့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိ ရရှိအောင်၊ ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်းမှာ ရှင်းလင်းလှပေသည်။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်နော်။
အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနစရိယ၊ဓမ္မစရိယ ဖားအောက်တောရဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒ န္တအာစိဏ္ဏ၏ ဖားအောက်တောရရိပ်သာကျောင်းတွင်အနောက်တိုင်းသား နိုင်ငံခြားသား ယောဂီအများအပြား ရဟန်းဝတ်၍ တရားအားထုတ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၄င်းတို့အထဲတွင်သန်းကြွယ်သူဌေးမိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသော လခစား အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ရှင်တစ်ဦးလည်း ရဟန်းဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်နေသည်။
အဆိုပါ ရဟန်းကို မီဒီယာ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးက မေးခွန်းထုတ်သည်။” အရှင်ဘုရားသည် သန်းကြွယ်သူဌေး သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပါလျက် အဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်ရဟန်းဝတ်ပြီး သမထဝိပဿနာတရား စခန်းမှာ တရားအားထုတ်နေပါသနည်း။ အဘယ်အထိ ဤသို့တရားအားထုတ်ရန် ရည်မှန်းထားပါသနည်း” ဟုမေးသည်။
ထိုအခါ ရဟန်းကဖြေသည်မှာ ” ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး အမေရိက သာသနာပြုခရီးတွင် ဟောကြားညွှန်ပြတော်မူသော ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို နာကြားရသောအခါ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်မှာ ဗုဒ္ဓဖြစ်နေကြောင်း ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိရှိသမျှနှင့် ရှိခဲသမျှ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တွင် ပညာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်နေကြောင်း သိရှိလာရပြီး ဗုဒ္ဓ၏ စာပေများက ညွှန်ပြထားသော အဆုံးအမများ ကသာလျှင် မိမိဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် ပစ္စုပ္ပန်သံသရာနှစ်ဖြာ ကောင်းကျိုးအတွက် အမှန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ၊ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် သည်တိုင်း ၊ သည်ဒေသ ပုဂ္ဂိုလ်များကလက်ခံထားသရွေ့ ဤတစ်ပါးကျောင်းကလေးတွင် တစ်သက်ပတ်လုံးနေပြီး တရားအားထုတ်သွားရန် ရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း” ရှင်းပြသွားသည်။
ထိုကြောင့် ကကြီး ၊ ခကွေးကအစ မူလတန်းမှနေ တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆင့်အထိ သင်ကြားခဲ့ကြသည့် စာပေပညာများ၊ အတတ်ပညာ နည်းပညာများသည် ပစ္စုပ္ပန်တစ်ဘဝစားဝတ်နေရေး ချမ်းသာရေးအတွက် အကျိုးပြုသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ တရားတော်များ၊ဗုဒ္ဓစာပေများမှာကား မိမိ၏ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝနှင့် သံသရာအဆက်ဆက်တို့တွင် အမြင့်ဆုံး အမြတ်ဆုံး အချမ်းသာဆုံးနှင့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိ ရရှိအောင် ၊ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်းမှာ ရှင်းလင်းလှပေသည်။
(ကျီးသဲညွှန့်နိုင်) copy-Bhikkhu’s Dhamma
ကွကျဥခှံတှကေို လုံးဝလှငျ့မပဈနဲ့နျော…ဒီလို အပငျတှအေတှကျ အားဆေးလုပျလို့ရတယျ